စီးပွားရေးအခြေအနေကြောင့် ပဲခူးမှာအကြော်ရောင်းနေရရှာတဲ့သိဂီင်္ထွန်း - Cele Connections
Alpha & | 24/10/2019 | Celebrity | No Comments
အနုပညာလောကရဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ သိင်္ဂီထွန်းကိုတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်နော် ။ အမေ ခန်းတွေက အများဆုံးသရုပ်ဆောင်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပီပြင်တဲ့ ဇာတ်ပို့မင်းသမီးကြီး တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဗီလိန်ခန်းတွေမှာလည်း ပရိသတ်မုန်းလောက်အောင် ပီပီပြင်ပြင် သရုပ်ဆောင်နိုင်လွန်းတဲ့ သူမကို အားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများကြီးပါပဲနော် ။ လတ်တလောမှာတော့ သိင်္ဂီထွန်းတစ်ယောက် စီးပွားရေးအခြေနေကြောင့် ပဲခူးမှာ အကြော်ရောင်းနေရပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ ..။
” စီးပွားအခြေနေအရ ပဲခူး မြို့သို့အကြော်ရောင်းရန် ကားပေါ်အဝတ်စားလဲပြီး မြို့ဝင်ကမင်းသားကြီး လဘက်ရည်ဆိုင်မှာ အိပ်ချင်ပြေအောင်ကပြာကယာ လ္ဘက်ရည်သောက်.ရွှေသာလျှောင်းဘုရားရှေ့အလျှင်အမြန်ဓာတ် ပုံရိုကိပြီးဘုရားဘေးကမွန်ရွာမှာ အကြော်ရောင်းရင်း ပင်ပန်းလွန်းလို့စိတ်တွေဖောက်ကာ လူသတ်မူတွေဖြစ်ခဲ့သည်. ချစ်မိတ်ဆွေများစိတ်ဆိုးရဘူးနော် .ခွင့်လွတ်ပါလို့. ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာထက်ကနေ ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေ ပေးခဲ့တာပါ ။
သူမရဲ့အမာခံပရိသတ်တွေကတော့ ကားရိုက်တွေ ဆက်နေတယ်နော် လို့မှတ်ချက်ပေးထားကြတာတွေ့ရပါတယ် ။ ဆင်းရဲတဲ့ အကြော်သည်မိန်းမ တစ်ယောက်ရဲ့ ကာရိုက်တာကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကတော့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ ..။ မင်းသမီး သိင်္ဂီထွန်းလား အကြော်သည်မလား ဆိုတာ ကိုဝေခွဲရခက်သွားလောက်တဲ့ သဏ္ဍန်လုပ်သရုပ်တူအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော် ။
Source : Theingi Tun
အနုပညာလောကရဲ့ ဝါရငျ့သရုပျဆောငျတဈယောကျ ဖွဈတဲ့ သိင်ျဂီထှနျးကိုတော့ ပရိသတျတှအေားလုံးသိမယျထငျပါတယျနျော ။ အမေ ခနျးတှကေ အမြားဆုံးသရုပျဆောငျပွီး သရုပျဆောငျပီပွငျတဲ့ ဇာတျပို့မငျးသမီးကွီး တဈယောကျ ပဲ ဖွဈပါတယျ ။ ဗီလိနျခနျးတှမှောလညျး ပရိသတျမုနျးလောကျအောငျ ပီပီပွငျပွငျ သရုပျဆောငျနိုငျလှနျးတဲ့ သူမကို အားပေးကွတဲ့ ပရိသတျတှေ အမြားကွီးပါပဲနျော ။ လတျတလောမှာတော့ သိင်ျဂီထှနျးတဈယောကျ စီးပှားရေးအခွနေကွေောငျ့ ပဲခူးမှာ အကွျောရောငျးနရေပါတယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ ..။
” စီးပှားအခွနေအေရ ပဲခူး မွို့သို့အကွျောရောငျးရနျ ကားပျေါအဝတျစားလဲပွီး မွို့ဝငျကမငျးသားကွီး လဘကျရညျဆိုငျမှာ အိပျခငျြပွအေောငျကပွာကယာ လ်ဘကျရညျသောကျ.ရှသောလြှောငျးဘုရားရှအေ့လြှငျအမွနျဓာတျ ပုံရိုကိပွီးဘုရားဘေးကမှနျရှာမှာ အကွျောရောငျးရငျး ပငျပနျးလှနျးလို့စိတျတှဖေောကျကာ လူသတျမူတှဖွေဈခဲ့သညျ. ခဈြမိတျဆှမြေားစိတျဆိုးရဘူးနျော .ခှငျ့လှတျပါလို့. ” ဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူ သူ့ရဲ့ ကာရိုကျတာနဲ့ ဇာတျလမျးရိုကျကူးနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေို လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာထကျကနေ ပရိသတျတှကေိုမြှဝေ ပေးခဲ့တာပါ ။
သူမရဲ့အမာခံပရိသတျတှကေတော့ ကားရိုကျတှေ ဆကျနတေယျနျော လို့မှတျခကျြပေးထားကွတာတှရေ့ပါတယျ ။ ဆငျးရဲတဲ့ အကွျောသညျမိနျးမ တဈယောကျရဲ့ ကာရိုကျတာကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျထားတယျဆိုတာကတော့ သူမရဲ့ ပုံရိပျတှကေိုကွညျ့ရငျသိနိုငျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ ..။ မငျးသမီး သိင်ျဂီထှနျးလား အကွျောသညျမလား ဆိုတာ ကိုဝခှေဲရခကျသှားလောကျတဲ့ သဏ်ဍနျလုပျသရုပျတူအောငျ ဖနျတီးထားတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျတှကေို Cele Connection ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော ။
” နွေးထွေး တဲ့ မေတ္တာတွေပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကို သေတဲ့ထိကျေးဇူးမမေ့ဘူးဆိုတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး “
ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ဘဲ ပရိသတ်တွေအတွက် မိုးရေထဲမှာတောင် ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ရတနာမိုင်
နွေးထွေးတဲ့ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ နေကြာပန်းလေးတစ်ပွင့်လို တောက်ပနေတဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့ ပုံရိပ်လေး